နှစ်ကူး: April 2007
thin-gyan blog မှာတင်မယ့်ဟာ အီးရောအီးရောနဲ့ အပြင်းကြီးနေတာ.. အခုမှပဲတင်ဖြစ်တော့တယ်.. ရိုက်တာက သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ကရိုက်ထားတာ.. မဏ္ဍပ်သွားတဲ့ အိမ်က မဒီတွေကို နေ့လည်ကြသွားကြိုတော့ လိုက်သွားတာ။ အလကားတော့ဘယ်နေလိမ့်မလဲနော်... လမ်းမှာတွေ့သမျှရိုက်လာခဲ့တာပေါ့။
ခွင့်တောင်းပြီး မရိုက်ခဲ့ဘဲ အမြန်အမြန်ရိုက်ခဲ့ရတော့ ပုံတွေကလည်း ရွဲ့တဲ့ဟာကရွဲ့ ၊ စောင်းတဲ့ဟာကစောင်း။ အဲဒါလေးတွေကို သည်းခံ။
စွမ်းဟိုတယ် ရှေ့တစ်လျှောက် ကားတွေတိုးမပေါက်တော့ မဏ္ဍပ်တွေရှေ့ လမ်လျှောက်ကြည့်တဲ့သူတွေ တော်တော်များတယ်။ ဆိုင်ကယ်တွေရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ကြည့်တဲ့ စတိုင်ကလဲ မန်းသင်္ကြန်မှာ ခေတ်စားနေပါပြီထင်ပါ့။ ဒီတော့ စီးပွားရေးဈေးကွက် မြင်သူတွေရဲ့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လာတာကြောင့် ဆိုင်ကယ်အပ် လက်ခံတဲ့နေရာတွေလဲ ဟိုမှဒီ အစီအရီ ပေါ်ထွက်လို့လာပါတယ်။ အဲဒါကို သင်္ကြန်ဈေးကွက် လို့ခေါ်တယ်… (ဘယ်စွယ်စုံကျမ်းမှ သွားမရှာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် နံမည်ပေးထားတာ… ဟိ….ဟိ… ) ဆိုင်ကယ်အပ်လက်ခံတဲ့ သူတွေများနေတော့ customer တွေကို ကျိုက်ထီးရိုးက ထမင်းဆိုင်တွေလို အလုအရက်ပဲ။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဆိုင်ကယ် 300 ပါ အမ်းစရာမရှိရင်တော့ 500 ယူပါတယ်။ အဲ… 200 ပဲပါတဲ့ကြတော့လဲ အထူးဈေးနှုန်းပေါ့။ ကားအပ်ခကြတော့ ဈေးနှုန်းက 2500 တဲ့။ ဈေးနှုန်းကလဲ ပဲခူး နဲ့ ပုဂံ။ အဲဒါကို အခြေအနေအရဈေးကွက် ဟုခေါ်သည်။
-ဘာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းဘေးမှာမူးရူးနေလို့ ဆိုင်ကယ်ပျောက် သွားတာထက်တော့ သက်သာပါသေးရဲ့။ ပျော်တဲ့သူတွေကပျော်နေ ၊ မြူးတဲ့သူတွေကမြူးနေ ၊ မူးတဲ့သူကမူးနေ ၊ ရူးတဲ့သူကရူးနေ လျှက်သင်္ကြန်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကတော့ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေဆဲပါ။
အားလုံးအတွက် သင်္ကြန်အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ....
-မဏ္ဍပ်တွေလဲနား ၊ စင်ပေါ်က မမတွေလဲထမင်စားနား ၊ စင်အောက်က ကိုကိုကဲတွေလဲ ခေတ္တနား…
-လက်မှတ်ပျောက်လျှင်တာဝန်မယူ ဆိုလို့များ အပ်မဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေမရှိတာလား တိဖူး…
-ဒီနှစ်သင်္ကြန် မမတွေက ကျစ်ဆံမြီးရှတိုင် ၊ ကိုကိုတွေက ပန့် ရှတိုင်တွေနဲ့… အပြတ်မိတယ်ဟေ့…
-ရုတ်တရက် ဟောလို “ဘွမ်း” ဆိုရင်.. အော်လိုက်ကြတာများ “အား” ခနဲ့ပဲ….
-ရှေ့ကကားကို နောက်ကကားက kiss ပေးလိုက်တော့ ကားပေါ်က လူတွေဗျာများကုန်ရတာပေါ့ …
-ဒါက ဘယ်ရွာကလဲ.. အဲ.. မှုတ်ပါဖူး… အဒူတွေလဲ တိဖူး။ (အမျိုးတွေများပါနေမလား... သေချာရှာကြည့်) ဟိ...ဟိ...
-ဒီကလေးတွေ..ထမင်းဖိုးမလောက်လို့ ခေါင်းခြင်းရိုက် တိုင်ပင်နေကြတာများလား… ( စဉ်းစားစရာပဲ )
-နေ့လည် 2:15 ဘဲရှိသေးတာ ၀ီရိယကောင်းလိုက်ပုံများ …. ( 73 လမ်းပေါ်ကနေ 26 လမ်း ကိုလှမ်းရိုက်ထားတာ )
-ဒီဆိုင်ကို သိကြမယ်ထင်တယ် ဒါ Mandalay ရဲ့ Top 10 မြန်မာထမင်းဆိုင်တွေထဲက တစ်ဆိုင်ပဲလေ သင်္ကြန်တွင်းမှာ သူလဲပဲ ရှတိုင်တစ်ညိုး နဲ့...
-ဓါတ်ဆီ ပါတယ်… မီးခြစ်ပါတယ်… မီးရှို့လိုက်… မီးရှို့လိုက်… ခွိ… ခွိ… ခွိ…
-ဟဲ…ဟဲ… ဒီစုံတွဲကိုလည်း အလွတ်မပေးဘူး… ရိုက်ခဲ့တယ်…
-ကားတွေကလည်း အလျှိုအလျှိုနဲ့… ကျူံးဘက်ကိုပဲ ဦးတည်လို့….
-ဟော..ဟိုနားမှာ ရုံးစုရုံးစုနဲ့ ဘာတွေပါလိမ့်…. သွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်…
-အား..ပါး...ရွှေဆင်မင်းက မမကြီးတွေ ကဲနေတာ အရမ်းဘဲ…..
-သူများတွေ ပျော်မြူနေတဲ့ အချိန်မှ ရတနာပုံဈေးကြီးဘေးက လမ်းကြီးက အနားယူနေပုံများ အေးအေးဆေးဆေး….
Posted by နှစ်ကူး at 4/28/2007 08:25:00 AM3comments
ထူးထူးခြားခြား အပြုအမူ ၁၀ မျိူး
ဒီလို..ဒီလို.. ရေးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကတော့.. ဟော..ဟို..က လမ်းမှာပိုက်ဆံတွေ့ရင် ဘယ်တော့မှမကောက်တတ်တဲ့ ah mei ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ( စိတ်မကောက်နဲ့ … ထိပ်ပြောင်ကြီးနဲ့ ရတတ်တယ် ) ခွိ…ခွိ… ခွိ…
၁။ အချက်စပြောရရင်… သူငယ်ချင်းတွေကတော့ပြောကြတာပဲ … အနော်နဲ့ အပြင်သွားဖို့ Date ရင် 1 နာရီခွာပြီးချိန်းရတယ်တဲ့ မယုံပေါင်… အီစကို ရောက်သွား လိုက်တိုင်း သူတို့က ရှိကြတော့ဘူး … ( P.S ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ အဲလောက်နောက်ကျတတ်တယ်လို့ ထင်ပေါင် ) …ဟီး…ဟီး…
၂။ ၀ယ်ထားတဲ့ အင်္ကျီအသစ်လေးတွေဆိုရင် မ၀တ်ရက်လို့သိမ်းထားပြီး အလှကြည့်တတ်တယ် ( ဘယ်လိုကြီးလဲသိဘူးနော် ) ... အ၀တ်စားတွေကိုဝယ်ပြီး မ၀တ်ဘဲ သိမ်းထားတာဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့ နောင်တစ်ချိန်ကျရင် လေလံတင် ရောင်းစားဖို့လို့… ( မွန်ရိုးကိုအားကျလို့ )
၃။ အပြင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ရင် ခါးခါးလူးတာ အသာထားအုံး .. ဘာဝတ်ရမှာလည်းလို့ ရွေးရတာကို ၁ နာရီပဲ … ;-p ( ပြီးတော့လဲ ဒီပုံ.. ဒီပုံပါပဲ... )
၄။ မနက်ဆိုရင်လည်း ၆ နာရီဆို ဒေါင်ခနဲ့ နိုးလာပြီ… ( မချီးကျူးနဲ့အုံး ဆုံးအောင်နားထောင် ) ဟဲ…ဟဲ… ၉ နာရီရဲ့ဟိုဘက် ၊ ဟိုးးး..ဘက် လောက်ဆိုအိပ်ရာထပြီ။ ( ဇိမ်ကျလိုက်တာလွန်ပါရော။ J မ၀င်နဲ့ … ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ် )
၅။ စာမေးပွဲနားနီးမှ ပြာရာခတ် စာလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလဲရှိသေး.. ဘာလို့လဲသိလား စာတွေက ကြိုပြီးကျက်ထားရင် မေ့တတ်လို့.. ( အဲလိုဥာဏ်ကောင်းလိုက်ပုံများ ... ) စာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း… နေရာကလဲရွေးသေး… ကြက်တူရွေးတွေလို အာဗြဲကြီး အော်ကျက်ရမှ စာရတယ်လို့ထင်တာ…
၆။ ကိုယ့်ကိုချီးကျူးတဲ့သူတွေအနားဆို ခပ်ခွာခွာလေးနေလေ့ရှိတယ်… ( ရှက်လို့ ).. ဟီးး…ဟီးးး
၇။ သြော်…သြော်…ပြောချင်တာကျန်သေးတယ်… စိတ်ဆိုးအောင် ၊ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်အောင် ၊ နောက်ကော ဘာကျန်သေးပါလိမ့်... ထားပါတော့လေ.. အဲလိုလုပ်တဲ့သူဆို အလွန်မုန်းးးးးးးးးးးးးးးးး…။ ပြီးတော့ စကားကိုမဆင်မခြင် ပြောတတ်ပြီး ၊ ကိုယ့်မျက်ချီးကိုယ် မမြင်တတ်တဲ့သူလည်း ကြည့်မရဘူး။ ( လုံးဝ....လုံးဝ....ဘဲ )... တစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးနေရင် အဲဒီလူကို သေနတ်နဲ့ တစ်ဒိုင်းဒိုင်းပြစ်ပလိုက်တာ ( ဟီး...ဟီး.. စိတ်ထဲကနေ )
၈။ ဟဲ… ဟဲ… ဓါတ်ပုံရိုက်တာကိုတော့… ၀ါသနာပါတယ်… သူများရော ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောပဲ။ (အမြင်ကတ်လောက်အောင်ကိုရိုက်တာ)
၉။ ရာသီဥတုပူရင် မကြိုက်ဘူး… ဖြစ်နိုင်ရင် မေမြို့ရာသီဥတုကို မန္တလေးဆီရွှေ့လို့ရရင်ရွှေ့ လာစေချင်တာ..။ ( သိပ်လဲမဝေးဘဲနဲ့ အရမ်းကွာတာပဲနော်... )
၁၀။ အိမ်မှာ ထမင်းစားရင်.. ပန်းကန်ဆေးရမှာဆိုးလို့ ဟိုလူ့ဆီတစ်ဇွန်း...ဒီလူ့ဆီတစ်ဇွန်းနဲ့ .. ဗိုက်ဝတတ်သည်.. ( ပိုင်လိုက်တဲ့ အကြံအစည် )
တော်သေးပြီ.... နောက်ထက် ၁၀ ချက်မကကျန်သေးသည်... အကုန်သိကုန်ရင်.... ခက်ရချေသေးရဲ့..... ဟိ...ဟိ...
ပြန်ပြီးတော့ Tag ရှင်ပါဒယ်... အဒူတွေကို Tag ရမှန်းတိဖူးးးးး
then ပိုက်ပိုက်ကုန်တဲ့အခါ အတိုးမဲ့ ချီးပေးမယ့်သူတွေ များကြီး..များကြီး ရှိမှာဖြစ်ပြီး
else ပြန်ရစရာအကြွေးတွေအကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်… ( မိုက်တယ်ကွာ… ရွှီး…ဖြောင်း..ဖြောင်း..ဖြောင်း… )
Posted by နှစ်ကူး at 4/24/2007 10:49:00 AM3comments
Posted by နှစ်ကူး at 4/23/2007 05:45:00 PM0comments
ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ blog တစ်ခုလုပ်ထားပြီး ပစ်ထားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ... ဟောဒီ blog ကို သုံးတတ်သွားအောင် စေတနာအပြည့်နဲ့ သင်ကြားပေး လိုက်တဲ့ ဆရာလင်းထိုက် နဲ့ Xeon Cyber Cafe (MDY) တို့ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
Posted by နှစ်ကူး at 4/05/2007 09:09:00 PM0comments
ဒါလေးကိုရေးဖို့ ... အကြာကြီးကြိုးစားလိုက်ရတာ..မယုံမရှိနဲ့..အဲဒါ.တကယ်.0
Posted by နှစ်ကူး at 4/02/2007 08:52:00 PM0comments
ဒါလေးကိုရေးဖို့ ... အကြာကြီးကြိုးစားလိုက်ရတာ..မယ...